Wese munhu ari kushandisa mwenje weLED, Ndezvipi zvakanakira?
Chii chinotungamirirwa? Zita rizere re LED - mwenje inoburitsa diode .Light emitting diode rudzi rwe semiconductor iyo inogona kushandura simba remagetsi kuita simba remwenje. Mazuva ese simbi dzinozivikanwa sedzemhangura uye simbi mafambisi, nepo huni nerabha zviri insulators. Izvo zvinhu pakati pe conduc ...